Crochet top, isbeddel xagaaga | Bezzia
Maria vazquez | 12/05/2022 18:00 | Maxaan xirtaa, Isbeddellada
ka dusha sare ee matoorada waxay sannad walba ku soo noqdaan ururinta moodada si ay ugu dhawaaqaan habka xagaaga. Waxay ku sameeyaan wax ka badan ama ka yar oo caan ah iyadoo ku xiran sanadka, oo leh nuances kala duwan si ay ula qabsadaan isbeddellada. Xilli ciyaareedkan, tusaale ahaan, waxaa jira saddex isbeddel oo ka soo jeeda inta kale.
ka ururinta gu'ga-xagaaga 2022 Zara, Sfera ama Dadka Xorta ah ayaa na soo bandhiga, inta badan, korka-gacanta leh ee dhawaaqyada dabiiciga ah. Laakiin kuwani maaha kuwa ugu badan ee soo muuqda, laakiin waa naqshado midabyo badan leh oo leh ubaxyo ubax ah iyo kuwa crochet lagu daro dhar kale.
1 Dusha sare ee cad ama codadka dabiiciga ah
2 Dusha sare leh motifs midab leh
3 Blouses leh maydh-xiran
Dusha sare ee cad ama codadka dabiiciga ah
Dusha sare ee midabada dabiiciga ah ayaa ah kuwa ugu caansan ururinta hadda. Gaar ahaan kuwa ku jira dhawaaqyada cad-cad ama dhagaxa, oo aad u badan oo sahlan in la isku daro. Kuwaas waxaa guud ahaan lagu gartaa qaabkooda, oo toosan xadhig qaro weyn iyo qoorta wareegsan, sida naqshadaha daboolka Zara. Inkasta oo ay sidoo kale suurtogal tahay in la helo kaar-gacmeedyo leh gacmo gaaban oo qurux badan sida mid ka mid ah shirkadda Free People.
Dusha sare leh motifs midab leh
Ma waxaad raadinaysaa naqshado fara badan? Ku sharad naqshado midab leh ama midabyo midab leh. Waxaad ka heli doontaa xilli-xilliyeedkan dusha sare ee Crochet ka oo leh midabyo dhalaalaya sida cagaar, jaalle iyo casaan. Oo ay la socdaan kuwan, naqshado kale oo bohemian ah oo leh ubax midabyo badan leh.
Blouses leh maydh-xiran
Waa in aan qiranno in ka mid ah soo jeedinta aan maanta ka hadlayno, tani waa midka aan ugu jecelnahay guga. Oo waa kuwan blouses ka mid ah maro-qoto ama saqafka hore Way na qabsadeen. Waxay si fiican u dheelitiraan inta u dhaxaysa bohemian (crochet) iyo jaceylka (gacmo bararsan, ruffles ...).
Waxaad ka heli doontaa dhawr soo jeedin oo noocan oo kale ah oo caddaan ah oo ay weheliyaan kuwa kale ku darto motifs ubaxa. Ma jeceshahay korka korka leh ee ubaxa cad iyo buluugga ah iyo gacmo-gaaban ee fufuska ah sidaan sameeyo? Waa naqshad Zara ah.
Ma jeceshahay dusha sare ee crochet? Wax ma ku haysaa armaajooyinkaaga?
Wadada buuxda ee maqaalka: Bezzia » fashion » Maxaan xirtaa » Dusha sare ee Crochet, isbeddel xagaaga